Axmed Madoobe oo ka hadlay kulankii uu la yeeshay General Stephen Townsend | Dhacdo
Home Wararka Maanta Axmed Madoobe oo ka hadlay kulankii uu la yeeshay General Stephen Townsend
Axmed Madoobe oo ka hadlay kulankii uu la yeeshay General Stephen Townsend
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ka hadlay kulan uu gelinkii dambe ee shalay uu Magaalada Kismaayo kula yeeshay Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM), General Stephen Townsend.
Taliyaha ayaa Sabtidii gaaray Magaalada Kismaayo, iyadoo ujeedku uu u tagayna uu la xiriiro, sidii loo dardargelin lahaa hawlgalada ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab.
Kulanka oo ka dhacay Garoonka Diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee Magaalada Kismaayo ayay dibadjoog ka ahayd Saxaafadda.
Madaxweynaha Jubbaland ayaase sheegay in Taliyaha AFRICOM ay ka wadahadleen iskaashiga dagaalka lagula jiro maleeshiyada Al Shabaab iyo sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dadaalada looga hortagayo weerarada kooxaha argagixisada.
“Waxaan kulan miro dhal ah yeelanay General Stephen Townsend, oo aan ka wadahadalnay iskaashiga dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab iyo sida aan u ballaarin karno dadaalada looga hortagayo khataraha argagixisada ee gobolka.” Ayuu yiri Madaxweynaha oo warkan ku sheegay bartiisa xiriirka dadweynaha.
Previous articleQoorqoor oo Gaalkacyo u tagay xiiisadda ka dhalatay dilka Sheekh Cali Dheere
Next articleWararkii ugu dambeeyay go’doonka ay gashay Magaalada Jowhar